Noocyada gadhka: xulashooyinka ugufiican timaha wajiga | Ragga Stylish
Inaad si wanaagsan u kala doorato noocyada gadhka kala duwan waa tallaabada ugu horreysa ee loo qaado timaha wajiga waxaad ka dhigtaa kaabahaaga ugu fiican. Hiddo-wadaha iyo dookhaaga shaqsiyeed, ee nidaamkan, ayaa horseedi doona jidka.
Soo ogow tirada faraha badan ee timaha wajiga qaadan karaan, marka la eego garka buuxa iyo garka qayb ahaan:
1 Garka oo buuxa
1.1 Wuu turunturooday
1.2 Gadhka dhexdhexaadka ah
1.3 Gadh dheer
2 Garka qayb ahaan
3 Fursado badan oo loogu talagalay timaha wajigaaga
Garka oo buuxa
Garka buuxa waxaa lagu kala saaraa iyadoo ku saleysan dhererka timaha (gaaban ama seddex maalmood, dhexdhexaad iyo dheer):
Waa gadhka buuxa ee ugu gaaban halkaas iyo xulasho weyn oo timo wejiga loogu talagalay ragga oo dhan. Waxay si fiican ugu shaqaysaa labada gadhka qaro weyn iyo kuwa xoogaa aan caadiga ahayn.
Waxaad heli doontaa gadhka noocan ah adigoo timaha u oggolaanaya inay koraan inta u dhexeysa 1 iyo 4 maalmood, tirinta laga xiirto tii ugu dambeysay. Si aad u ilaaliso gadhka saddexda maalmood ah, waxaad u baahan doontaa inaad gadhkaaga gooyso dhowr jeer usbuucii.
In garka la qeexo iyo inkale waxay kuxirantahay dookhaaga shaqsiyeed. Haddii aad rabto gadhka dabiiciga ah, waad ka boodi kartaa tallaabadan. Taas bedelkeeda, natiijo aad loo qeexay, dhabanka iyo qoorta cadayo. Tani waxay sidoo kale siin doontaa taabasho nadiif ah haddii aad u aragto wax xoogaa cabsi badan.
Gadhka dhexdhexaadka ah
Garka buuxa waxay ku dhacdaa, cabir ka dib, yeelashada timo waji badan leh waxay noqotaa tayo aad u qiimo badan. Si ka duwan kii hore, garka dhexdhexaadka ahi wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa ragga leh garka qafiifka ah.
Gadhka noocan ahi wuxuu qaadanayaa ugu yaraan laba toddobaad inuu koro. Guud ahaan, way ka sii macaan badan tahay markii daryeel iyo taxaddar ku filan la siiyo. Marka lagu daro isticmaalka timaha ugu yaraan usbuucii hal mar, waxaa lagama maarmaan ah in laga shaqeeyo dusha (dhabannada, qoorta iyo inta badan garka iyo shaarubaha) si looga dhigo muuqaal qeexan. Inta badan shaqadani way ka duwan tahay nin walba, maadaama ay ku saleysan tahay la qabsiga heerka koritaanka iyo qeybinta timaha, iyo sidoo kale xaglaha iyo gooladaha wajiga.
Waa in la ogaadaa inay aad muhiim u tahay in gadhku aanu luminin dabiici ahaan hawshan. Waxay ku saabsan tahay jarista iyo xadeynta gelinta dadaalka ugu badan ee looga fogaanayo in gadhka uu ku dhammaado mid dabiici ah. Hadaad go aansato hagaaji gadhkaaga (Xusuusnow inaad adiguba fursad u leedahay inaad kaga tagto wax dabiici ah) qoorta ka xiir wax yar oo ukun ah oo muuji dhabannada haddii loo baahdo. Tallaabadan ugu dambeysa, hubi in xariiqa uusan aad u dheereyn ama uusan aad u hooseyn.
Waa nooca ugu xiisaha badan xiisaha gadhka sababo jira awgood. Waxay leeyihiin meel duurjoogta ah oo qalafsan oo isku mar ah. Iyo waxa ka sarreeya oo dhan waxay dareemaan wax weyn ragga oo dhan. Si kastaba ha noqotee, maahan ikhtiyaar ay heli karaan qof walba. Waxaad u baahan tahay inaad ka mid noqotid "kuwa la xushay" ee leh gadh iyo shaarib adag..
Laakiin genetics ka sokow waxaad kaloo u baahan tahay dulqaad. Waqti sii gadhku si uu u koro oo uga sii dheereeyo qadka jiinka. Dhanka kale, xaqiiqda oo ah inay dheertahay macnaheedu maaha inaysan u baahnayn dayactir. Ma taaban kartid, laakiin guud ahaan jarista iyo u qaabeynta si habboon waxay ka caawisaa inay u ekaato mid xoog badan.
Garka qayb ahaan
Hidda-wadaha door muhiim ah ayuu ku leeyahay gadhka. Haddii aadan heli karin gadh buuxa, waxaa jira xulashooyin kale oo waaweyn oo mudan in laga fiirsado.. Marka ay timaado timaha wajiga, waxaa fikrad fiican ah in la ogaado awoodahaaga oo la isku dayo in sida ugu badan looga faa’iideysto.
Gowgu waa mid ka mid ah gadhka ugu caansan. Timaha ku yaal bushimaha sare iyo garka ayaa loo oggol yahay inay koraan. Timaha dhabannada waa la xiiray, waana sababta burooyinka ugu daraan noocyada gadhka ku habboon ragga aan lahayn dhumucda lagama maarmaanka u ah aaggaan si ay u soo baxaan gadh dhexdhexaad ah ama dheer. Waxaa jira noocyo kaladuwan oo kaladuwan oo kuxiran faahfaahinta sida cabirka timaha iyo dusha:
Shaarubaha iyo riyaha ayaa isku xidhan. Qaabku wuxuu noqon karaa mid wareegsan ama laba jibbaaran.
Shaarubaha iyo riyaha ayaa go'an. Waxay u egtahay sida saddexagal roon: shaarubahu way ka ballaaran yihiin riyaha.
Shaarubaha iyo riyaha ayaa go'an. Waxay u egtahay barroosinka: riyaha ayaa ka ballaadhan shaarubaha.
Fursado badan oo loogu talagalay timaha wajigaaga
Noocyada kale ee la tixgelinayo waa shaarubaha caadiga ah iyo dhogor riyaha oo aan shaarib lahayn.
Noocyo badan oo shaarib ah ayaa jira. Sida garka buuxa, waxaa lagama maarmaan ah in lagu tijaabiyo dhumucdeeda iyo qaabkeeda illaa aad ka hesho nooca ugu sasabashada badan ee wejigaaga.
Ilkaha shaarubaha aan lahayn noqon karaa mid weyn (qiyaas ahaan baaxadda bushimaha oo kale) ama cidhiidhi ah, Sidee xaalku yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Noocyada gadhka